Isiqingatha soBuntu, isilwanyana sesiHlomelo: Imifanekiso yamathambo amaxesha amandulo
Kuphela nje ngokuba abantu bebaxelela amabali, kuye kwandipha umdla ngezilwanyana ezisiqingatha sabantu kunye nesiqingatha sezilwanyana. Amandla ale archetype angabonakala ekuphikeleni kweengongoma zanamhlanje ze-waswolves, i-vampires, uDkt. Jeckyll kunye noMnu Hyde, kunye nezinye izilwanyana ze-monster / ze-horror. UBram Stoker wabhala uDracula ngowe-1897, kwaye ngaphezu kwekhulu leminyaka umfanekiso we-vampire sele uzifake ngokwayo njengenxalenye yesiganeko esidumile.
Kuqiqayo ukukhumbula ukuba amabali athandwayo adluliselwe ngokutya okanye kwiimidlalo zeemidlalo kwiminyaka emininzi edlulileyo yinto esicinga ngayo namhlanje njengenganekwane. Kwiminyaka engama-2 000, abantu banokuyithatha ingqungquthela yevampire njengento encamisayo yokufunda kunye neengxelo zeMinotaur ejikeleza ihlabathi.
Uninzi lwabantu bomntu / iilwimi ezinokuba siyazi ukuba zenzeke okokuqala kwiibali zaseGrisi okanye zaseYiputa . Kungenzeka ukuba amanye ala mabali sele ekhona ngelo xesha, kodwa sithembele kwiinkcubeko zasendulo ngeelwimi ezibhaliweyo esinokuzichaza ngemimiselo yokuqala yabalinganiswa.
Makhe sijonge ezinye zeengcamango zesigane-sabantu, isiqingatha -zilwanyana ezivela kumabali axelwe kwiminyaka edlulileyo.
Esinye sezidalwa eziqingqiweyo ezidumileyo yi-centaur, indoda yehashe yesiGrike. Iingcamango ezithakazelisayo malunga nemvelaphi ye-centaur kukuba zadalwa xa abantu beenkcubeko zaseMinoan, abangaqhelekanga ngamahashe, iintlanga zokuqala ezidibeneyo zabamahashe, kwaye bavuyiswa kakhulu ngekhono abadala ngayo amabali abantu .
Kungakhathaliseki ukuba yintoni imvelaphi, i-centaur ikhuthazwe kumaxesha aseRoma, ngexesha apho kwakukho ingxoxo enkulu yenzululwazi malunga nokuba izidalwa zikhona ngokwenene - ininzi indlela i-yeti iphikisana nayo namhlanje. Kwaye i-centaur iye yabakho kwiindaba-ndaba ukususela ngelo xesha, kwabonakala nakwiincwadi zikaHarry Potter kunye namafilimu.
U-Echidna ngumfazi wesigamu, inxenye ye-snake kwi-Mythology yamaGrisi, apho waziwa khona njengeqabane elinoyikekayo inyoka, uTyphon, nomama wezona zininzi ezimbi kakhulu. Abanye abaphengululi bakholelwa ukuba aba bantu bavela kwiimbali zama-dragons ngamaxesha aphakathi.
Kwimbali yamaGrike namaRoma, i-harpy yintaka inentloko yomfazi. Umlobi u-Ovid wabachaza njengabantu abathandekayo. Kwimbali, bayaziwa ngokuba ngumthombo womoya owonakalisayo.
Namhlanje, ibhinqa lingaziwa emva kwakhe njengeHarpy xa abanye bemfumana ecasulayo, nesinye isenzi esithi "nag" "ingoma."
Kwakhona kwiintetho zamaGrike, i-Gorgons yayingabodade abathathu babengabantu bonke ngeendlela zonke-ngaphandle kweenwele ezenziwe nge-writhing, inyoka. Babesaba kakhulu, ukuba nabani na abajongeyo ngokukhawuleza baphenduka baba ngamatye.
Iimpawu ezifanayo zibonakala kwiinkulungwane zokuqala ze-Greek-telling-story, apho izidalwa ezinjenge-gorgon nazo zazinamabala kunye nezihlunu, kungekhona nje iinwele ezithathayo.
Abanye abantu bacacisa ukuba ukungabikho kweentlanzi ezingenangqiqo kwabanye abantu abangabonakalisa ukuba zinxulumene neendabuko zokuqala ezinjenge-Gorgons.
Nasi imeko engaqhelekanga apho kungesona isilwanyana, kodwa isityalo esiyingxenye yesiqingatha se-hybrid.
Isityalo se-mandrake yiqela langempela lezityalo (uhlobo lweMandragora) olufumaneka kwingingqi yeMeditera, eneendawo ezikhethekileyo zokuba neengcambu ezibukeka ngathi ubuso bomntu. Oku, kudibene nenyaniso yokuba isityalo sinempahla ye-hallucinogenic, sikhokelela ekungeneni kwamagunya okungena kwintlalo yabantu. Kwimbali, xa isityalo sitshitshiweyo, ukukhwaza kwayo kunokubulala umntu owuvayo.
Abalandeli bakaHarry Potter baya kukukhumbula ukuba ama-mandrake avela kwezo ncwadi nangamafilimu. Ibali ngokucacileyo linamandla okuhlala.
Ulwazi lokuqala kunye nale sidalwa enentloko kunye nomzimba ophezulu womfazi wesintu kunye nomzimba osezantsi kunye nomsila weentlanzi kuqala uvela kwiAsiriya yakudala, xa unkulunkulukazi u-Atargatis waguqula waba yintlanzi ngenxa yokuhlazeka ngokubulala kwakhe umthandi.
Ukususela ngoko, i-Mermaids ibonakale kumabali kuwo onke amabini, kwaye ayisoloko eyaziwayo njengengqiqo. UChristopher Columbus wafungela ukuba wabona ukunyaniseka kwezinto zobomi ekuhambeni kwakhe ukuya kwihlabathi elitsha.
I-mermaid ngumlingiswa oqhubeka nokuhlaziya, njengoko kubonakaliswe yi-Disney's blockbuster movie ka-1989, i -Little Mermaid , eyona yayingumfanekiso ka-Hans Christian Anderson ka-1837. Kwaye i-2017 yabona i-action action movie ye-story yebali, nayo.
Kwiimbali zesiGrike, kwaye emva koko, amaRoma, iMinotaur iyisidalwa esiyinxalenye yenkomo, inxalenye yomntu. Ivela ku-thixo wenkomo, iMinos, unkulunkulu omkhulu wempucuko yeMinoan yaseKrete. Ubonakala bakhe obudumileyo kwiindaba zamaGrike zale Theus zifuna ukuhlangula i-Ariadne kwi-labyrinth e-underworld.
Kodwa i-minotaur njengesidalwa semfihlakalo iye yahlala ihlala njalo, ibonakala kwi-Dante's Inferno, nakwimfihlakalo yanamhlanje. I-Hell Boy, ebonakalayo yokuqala ngo-1993 ii-comics, inguqulelo yanamhlanje ye-Minotaur. Omnye unokuthetha ukuba umlingiswa wezilwanyana kwi-Story of Beauty kunye nesilwanyana yinto enye inkolelo efanayo.
Esinye isidalwa esilungileyo esivela kwiibali zamaGrisi sisidayr, isidalwa esiyinxalenye yebhokhwe, inxalenye yomntu. Ngokungafani nezidalwa ezininzi ze-hybride zomlingo, i-satyr (okanye ukubonakaliswa kwe-Roman late, i-faun) ayiyingozi, kodwa izidalwa zenzelwe ukuzonwabisa.
Nanamhla, ukubiza umntu ongu - satyr kukubonisa ukuba banomdla ngokugqithiseleyo ngokuzonwabisa.
Kwiimbali zamandulo zamaGrisi, i-siren yayisidalwa esinentloko kunye nomzimba ophezulu womfazi wesintu kunye nemilenze nomsila weentaka.
Wayeyindalo ebungozi kubaqhubi bamatye, bebakhombela emadwaleni ngamaculo abo. Xa u-Odysseus ebuya eTroy e-epic eyaziwayo kaHomer, "i-Odyssey," wazibophelela kwisigxina senqanawa yakhe ukuze amelane neziqhwaba.
Umlando waqhubeka unyaka. Kwiminyaka emininzi kamva, uMlando-mlando waseRoma uPliny Omdala wayetyala ngokuphathelele uSirens njengezinto ezicingelayo, izidalwa ezifihliweyo kunokuba zidalwa. Benza ukubukeka kwimibhalo ye-1700 ye-Jesusit abafundisi, ababekholelwa ukuba bayinyani, kwaye nanamhlanje, umfazi ocinga ukuba unobungozi ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi-siren.
I-sphinx iyisidalwa esinentloko yomntu kunye nomzimba kunye neengwenya zeengonyama kwaye ngamanye amaxesha amaphiko okhozi nomsila wenyoka. Ngokuqhelekileyo ihlotshaniswa neYiputa yamandulo, ngenxa yesigxina esidumile seSphinx esinokutyelelwa namhlanje eGiza. Kodwa i-sphinx yayingumlingisi kwiGrike. Nomaphi apho ivela khona, i-Sphinx iyisidalwa esinobungozi esichazela abantu ukuba baphendule imibuzo, kwaye bayidla xa behluleka ukuphendula ngokuchanekileyo.
I-Sphinx manani kwibali le-Oedipus, apho ibango lakhe lidumo kukuba waphendula umkhwa we-Sphinx ngokuchanekileyo. Kwiimbali zesiGrike, i-sphinx inentloko yowesifazane; kumabali aseYiputa, uSphinx ngumntu.
Isidalwa esifana nentloko yomntu kunye nomzimba wengonyama ikhona kwiingcamango zase-mpuma ye-Asia.
Iingcali zeengqondo kunye nabaphengululi beengoma zengqungquthela zide zixubusha ukuba kutheni imveli yabantu inqweneleka kakhulu ngezidalwa ezixubileyo ezidibanisa iimpawu zomntu kunye nezilwanyana.
Abaphengululi banjengokugqibela uJoseph Campbell unokugcina ukuba ezi zi-archetypes ezingokwengqondo, iindlela zokubonakalisa uthando lwethu olusenkundleni-inzondo kunye nelizilwanyana zethu apho sasivela khona. Abanye babenokuzijonga ngokungathandabuzekiyo, nje ngokuba bahlaziye iimbali zamabali kunye namabali abangela umdlalo onyantisayo ongafuneki uhlalutyo.
Okunye Okufanele Uyazi Nge-Hercules
Apollo kunye neMaryas
Yiyiphi Intsimi Elysian kwiGreek Mythology?
I-Achilles 'Isithende: Iingozi Ze-Impermnability engapheliyo
IGrike Hero Perseus
Ubomi Nezophulo Zombulali Oyingqungquthela UWilliam Bonin, Umbulali We-Freeway
IKhadidiy Virtue ye-Prudence (Nokuba Oko kuthetha)
Venus e Gemini Uthando oluhambelana
Iingcebiso zokuFunda zesiNgesi
Iingxaki zeZibhalo zeMathematika zeKrisimesi zeBakala lesiThathu
I-Hampton University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data